Paompy mora foana, paompy afom-paty, baomba mpamono vonjy maika - FeiFanWei
Hebei FeiFanWei Technology Co, Ltd. dia orinasa iray feno momba ny fikarohana, famokarana, varotra ary fanofanana fitaovana famonjena vonjy maika. Izy io dia mamokatra fitaovana momba ny fiarovana ala, ahitra ary alokaloka, toy ny andian-kitay famonoana afo, rano fantsona azo tsapain-tanana, paompy kitapom-baravarana, fitaovam-piarovana manokana, sns .. Izy io no fitaovana famokarana rano sy fitaovana famonoana afo. any avaratra Sina.
Niorina tamin'ny 2001
Traikefa 20 taona
Maherin'ny 2 miliara
Avereno eto an-tany ny maitso！
Afo kitapo azo entina ...
Ny fitaovana iray dia mampifamatotra ny paompy 3-azo itokisana amin'ny motera 4-stoke. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny tenany, mirindra na mifanindry miaraka amin'ny paompy hafa, ary koa safidy malaza indrindra amin'ny fampiharana slip-on. Ny modely TBQ8 / 3 Ny motera motera cylinder tokana, ny kapoka roa, ny rivotra mangatsiaka ny herin'aratra 8HP Flow 340L / min Fisandratana sipa 7m Fisandratana ambony indrindra 165m ny haavon-tsolika 25m Fangaro tankina 25L Mavesatra amin'ny milina feno 15kg Fanombohana manomboka amin'ny tsipika tanana na herinaratra manomboka ...
Rano mitentina finday ...
Modely 250 karazana Herin'aratra ≥ 35HP Fandroahana ≥ 993 cc Fandehanana ambony indrindra ≥ 250 L / min Fiakarana ambony indrindra ≥ 800 m Ny halaviran-drano ≥ 10,000 m Extremement-n'ny tafiditry 45≥ Max. Ny halavan'ny fitrandrahana ≥ 7 m Ny savaivony anatiny 50 mm Ny fivoahana ivelany 40 mm Fahazoana ≤ 135 kgs Modely fanombohana Fanombohan'ny elektrika elektrika
Fiakarana avo ny fiara ...
Modely CXN-08/06 Ny herin'entera mandeha amin'ny alikaola pressure24HP Ny tsindry mahazoana ≥22MPa Ny tsindry miasa ≥18MPa Fidinana vita ≥40L / min mean Range ≥35m Ny halaviran'ny fiara fitaterana ≥5000m Max. Angataho ny lanjan'ny Net ≥1000m amin'ny milina feno ≤106kg
Modely TBQ50 / 2.5G karazana motera cylinder, rivotra mangatsiaka, efatra kapoka enina Engine Power ≥1.8HP Alàlana faran'izay farany> 150L / min Afovoany indrindra> 20m Fiakarana avo indrindra> 35m PumpN.W. Mode5kg mode Manomboka Recoil (fanombohana tanana)
Backpack Firehose kitapo
Masinina fanadiovana hosoka Ity vokatra ity indrindra c ...
Tambajotra fametrahana rano mitohana ny rano tsara ...
Ampiasaina indrindra amin'ny fitahirizana menaka mifangaro, fahaiza-manao ...
Famonoana afo (sosona tokana) Fitaovana: poly ...
• Vatosoa vita amin'ny vy vy: 1.5m na 1 ...
Famonoana ny ala ...
Commodity Fitaovana afo miady amin'ny ala Con ...
Famoronana afo / henan'omby any Platy • Zavamaniry ...
Karazana tsy mahay IProduct manokana: 120 x ...
Ny ekipa mpamonjy voina shinoa dia nandeha tany ivelany ary nandray anjara tamin'ilay fanavotana iraisam-pirenena
Raha nanitsy ny mekanika ny ekipa mpamonjy voina an-trano ary nahavita nanova ny tenany dia ny ekipa mpamonjy voina shinoa dia nankany ivelany ary nandray anjara tamin'ny famonjena ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ny volana Martsa 2019, firenena telo any atsimo atsinanan'i Afrika, mozambique, Zimbabwe ary Malawi no tratry ny tropi ...
Namonjy ny famonoana afo tany an-tendrombohitra i Shanxi yushe, tamin'ny andro fahavalo dia nahitana olona efa ho 7000 nandray anjara tamin'ny asa famonjena
Namoaka ny vaovao ny marainan'ny sampana fitantanana vonjy maika, ny marainan'ny faha-24, amin'izao fotoana izao, ny afo 3.1517 ″ ao anaty afo dia maty ny fandroahana rehetra sy ny fiambenana. Tokony ho tamin'ny 11:30 maraina, tamin'ny 17 martsa, nisy afo nandoro tamin'ny j ...